စကားများအရေးကြီးပုံ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
စကားလုံးများ၏တန်ဖိုးကိုအကြောင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ကောင်းတဲ့ . ငါဒီကနေကောင်းတဲ့အမှုအရာကိုးကားခဲ့ကြ , ကောင်းတဲ့စကားကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီအလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်. သာလူတိုင်းကိုဖတ်လျှင်, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနားလည်လိုက်နာ, ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျဖို့ပိုကောင်းတဲ့ရာအရပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်.
Muskn • အောက်တိုဘာလ 24, 2015 တွင် 9:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ငါ့အဘို့အချိန်သင်ခန်းစာတခုတခုအပေါ်မှာခဲ့သည်. ကျမ်းစာလေ့လာမှုမှာဒီကအရမ်းဘာသာရပ်ယနေ့ညအကြောင်းပြောနေတာခဲ့ကြသည်. သင့်ရဲ့ website မှာမှငါ့ကိုမဆွဲဘို့ဘုရားသခင့ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့တဲ့လမ်းအတွက်သူ့စကားလုံးရှင်းပြဖို့သင်အသုံးပြုနေတဲ့အတှကျဘုရားသခငျကိုကြေးဇူးတငျပါသညျနဲ့အလွယ်တကူနားလည်သဘောပေါက်.
ဘာဘရာ • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2016 တွင် 6:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
စကားများအမှန်ပင်အရေးကြီးလှသည်. ကောင်းသောအချက်အလက်. ဘုရားသခငျသညျအဘို့အကြှနျုပျ၏က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့အချိန်ယူကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုလည်းစကားများ၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအခြားသူများကိုသင်ပေးဖို့ဝန်ကြီးဌာနကအားပေးတော်မူပြီ.
ဖေါ်ပြ: 2016 ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် – အကြှနျုပျ၏ယောဘသည်အမဲလိုက်, အတွေ့အကြုံများ | အဆိုပါ SharePoint Effect
ဖေါ်ပြ: စကားလုံးမြား – ငှက်ပျော Wifey
ဖေါ်ပြ: တရားဟောပွော / အမှတ်တရ / ဂျိမ်း3/ နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ပါဝါကို